Kedu ihe kpatara m ji nọrọ na BlogBurst? | Martech Zone
Ekwenyesiri m ike na ọdịnaya m abụghị maka onye ọ bụla, mana blọọgụ m na-aga n’ihu. N'ihi Jim onye kpọrọ m ọbụna na-achọpụta na m abanyela n'elu 4,000 na Technorati.
Site na Blogburst: Nwee nnukwu Blog? Ee, echere m na m na-eme.
Anyị na-etinye blọọgụ dị ka nke gị na saịtị mgbasa ozi bụ isi. Mba… n’ezie, ị naghị eme ya.
Onye ọ bụla na-enweta nsonaazụ ọ bụla na ọrụ a?
Feb 23, 2007 n’elekere 12:53 nke abali
Obi ụtọ na ịbanye n'ime ọkwa 4,000
Feb 23, 2007 n’elekere 8:48 nke abali
Daalụ, Steven! Z-List amaliteghachila, emechara m mkpuchi nke Netscape.com na otu n'ime ihe m dere achuru m a Ntinye ngwa ngwa. Mmadụ atọ n'ime ndị ahụ nwetara ụda mgbasa ozi nke kpaliri m elu. More ọrụ n'ihu !!!
Feb 27, 2007 na 1:14 PM
Blog Burst mere ka m daa. 🙂
Feb 27, 2007 na 1:47 PM
M ga-echegbu onwe, engtech… ọ dịghị amasị na ha na-eme ihe ọ bụla n'ihi na m!